I-watercolor tattoo - Iimpawu eziphambili ze-watercolor zamadoda nabasetyhini
I-Watercolor Tattoo Design Iingcamango zamadoda nabasetyhini
Ukutshintshwa kwamathambo e-watercolor
Njengobuhle obuhle, ezi zakhiwo zifanekisela intsingiselo efana nayo. I tattoo ingabonakalisa imemori, ukubonakalisa inkolelo yakhe, ukubonakalisa uthando lwethu kulabo abadlulileyo okanye nje uhlobo lwezobugcisa. Ifomu eqhelekileyo yamathambo e-watercolor yiyo iintaka kunye nezinambuzane.
I-Butterfly yamanzi i-tattoos ebonakalisa ubomi, ithemba, i-metamorphosis nokuzalwa kwakhona kudla ngokusetyenziswa. Iifoto zamanzi ezicocekileyo ezinjenge-rose zibonisa uthando kunye nobuhle kodwa i-lotus ibonisa ubunyulu. Enye yeempawu eziqhelekileyo zeentyatyambo zeziqhamo ziyi-daffodil evutheka ngumoya, ebonisa ukuvumela ukuhamba kwezinto zobomi kunye nenkululeko.
Ubugcisa obungabonakaliyo buqhelekileyo kwaye bunobuncwane obunobumba be-tattooing. Ukuqhaqhafaza nokutshatyalaliswa kwemibala kufana nesimo sengqondo, iingcamango okanye uluvo. Ukutshintshwa koyilo oluhlukeneyo luchazwa ngokwahlukileyo ngababukeli.
I-Watercolor Tattoo Design For Women
I-Watercolor ibuyele imifanekiso yamantombazana
Umbala wamanzi ugxotha amathandle emantombazana
I-watercolor yezandla zamathambo ngamantombazana - Icandelo 1
Amanqaku embala amanzi amantombazana - Ingxenye 2
I-watercolor leg leg leg for women
Imibala yamathanga emanzini kumabhinqa
Iimpawu ze-Watercolor zecala lamantombazana
Umbala wamanzi umqolo wesigxina kumantombazana
Iimpawu zeeplastiki zamagxa ezinamantombazana
Umbala wamanzi umzobo wezandla zamantombazana
Umbala wamanzi umbala wamaphethelo emagxeni amantombazana
Iimpawu ze-Watercolor ze-Arm for women
I-Watercolor Tattoo Design For Men
I-watercolor sleeve tattoos yamadoda
Umbala wamanzi ugxeke amathambo kumadoda
Iimpawu ze-watercolor zomlenze wamadoda
Amathambo eminwe yamanzi kumanqaku
I-chest watercolor tattoos yamadoda
Ukuxubusha umthamo wamanzi we-tattoo kubantu
Ukubekwa ngokufanelekileyo kwamathambo e-watercolor
Isikhundla sokubekwa kwe-watercolor Tattoo kubalulekile njengoko ukhetha ukuyila kakuhle. Indawo yokuba nomnxeba kuxhomekeke kubukhulu be tattoo. Iimpawu ezinkulu zibukeka kakuhle xa zifakwa kwiindawo ezinkulu ezinjenge-back, isisu, intambo, imilenze kunye neendlebe, kanti iifotos ezincinci zilungele indawo ezincinci ezinjengama-ankle, izibonda, umgudu, umva weendlebe kunye neminwe.
Abanye abantu banemingcipheko yentlalontle kunye nezobugcisa ukuze bafumane inki. Kwabaninzi abantu balolu hlobo, iidotto kwiindawo ezinokuthi zigqutywe kalula zifanelekile ezinjenge-torso, indawo ye-hip.
I-watercolor tattoos iyancipha ngokukhawuleza ukuba ngaba kuthathelwa ingqalelo. Oku kubaluleke kakhulu ukugcina ikhuselekile ekukhanyeni kwelanga kwaye ukufumana amanqatha xa kuyimfuneko kubalulekile. I-watercolor tattoos ibonakala ngcono kunesikhumba esiluhlaza njengoko inkqubela ye-ink tattoo ibonakala ngokucacileyo kule ndlela yokubhala. Kukulungele ukhethe indawo ehlanganisiweyo okanye engaxubekiyo yokubhala tattoo.
Izicwangciso zokulungiselela ukufumana tattoo
Zimbalwa izinto eziza kukhunjulwa ngaphambi kokubhala tattoo zi:
Ukutya isidlo esifanelekileyo ngaphambi kokuya kubhala itekisi njengoko umzimba Ufuna amandla ukuphulukisa umonakalo we-tattoo kunye nokukhusela ukulamba indlala xa iiseshoni zokuthayibha zide. Zigcine uziqhelise ixesha lonke.
Gqoka iimpahla ezikhululekile ukususa okanye ukukhupha ngokuxhomekeke kwindawo ekubhalwa kuyo.
Yilungiselele zonke izinto ezifunekayo emva kokunakekelwa kwezottoo ezifana ne-antibacterial oil or gauze. Kungcono ukubuza ngombhali we-tattoo ngaphambili ngaphambi kwazo zonke izinto ezifunekayo zokuthengwa.
Iintlobo zamathambo e-watercolor
I-watercolor tattoos yindlela ekhethekileyo yoyilo lwe tattoo ezenziwe kwiibhentshi kunye nemibhobho yembala. Ukudibanisa imibala eyahlukeneyo eyenza kwenza ukuba kukhangeleke. Ngohlobo olubanzi lweendlela ezikhoyo, ukutyunjwa kokuhlelwa kobunzima kuyinselele. Iintlobo ezibini eziphambili zikwahlula ngokusekelwe kumgangatho wobumnyama obumnyama.
I-Watercolor Tattoos ngaphandle kwesiseko seNtsundu -
I-watercolor tattoos ngaphandle kwesiseko esimnyama kuboniswa njengombonakaliso we-tattoo ngaphandle komgca omnyama okanye umsebenzi womgca. Ukuvelisa iitotto ezibukeka ngathi zifana nepeyti ye-watercolor. Ezi ntlobo zee tattoos ziye zaphelela emaphethelweni afana nokudibanisa nolusu kwaye kunzima ukwahlula. Eyona nto ixhomekeke kwimbala eqaqambileyo yoyilo ukwenzela ukuba ikhangele ngakumbi.
I-Watercolor Tattoos ngesiseko esimnyama
I-watercolor tattoos kunye nesiseko esimnyama siyila ngomsebenzi othile. Umbala wenziwa ngoko mgca msebenzi. Umsebenzi womgca wesigxina unikeza umlinganiselo ophezulu othe umahluko ngokuthelekiswa nabangenawo umnyama omnyama. Abaninzi bamathambo bagcina isiseko esibamnyama ngezizathu ezibini. Isizathu sokuqala ubuchule besiseko esimnyama ukuya kwixesha elide kunye nesizathu sesibini kuba ungenalwazi lomdwebi wezandla ekunikezeni izakhiwo ngaphandle kwemida emnyama.
I-Watercolor edibeneyo yokuyila
I-Watercolor i-Floral tattoos- Iimpawu ze-watercolor zezimbali zithandwa kakhulu njengoko zifika ngemibala enemibala kunye nemilo. Iimpawu eziqhelekileyo ezidalwa zi-roses, i-lotus, i-sunflower, i-daffodils, i-tulips, ientyantyambo ze-cherry kunye neentyatyambo. Le nto ingenziwa njengeentyatyambo enye okanye kwi-bunch ekunikeni iliso elimangalisayo.
Butterfly watercolor tattoos- Ii-Butterflies zilungele ukuba zisetyenziswe njengobugcisa be tattoo njengalezi zinomfanekiso obonisa umbala obonakalayo ngobugcisa. Umdwebi we-tattoo unokudibanisa imibala emininzi kwaye ahlakulele iipateni ezibalaseleyo.
Iintlanzi zamanzi ze-watercolor tattoos- Iintlanzi ze-watercolor tattoos zikhangeleka kwi-body of bearer njengoko zikholisa ubuhle obuhle kwaye bukhangayo. Ukudibanisa imibala emininzi kunye neendlela ezikhulayo kunika ukubukeka kwangaphambili.
I-Wolf watercolor tattoos- I-Wolf watercolor tattoos yinto enye eyaziwayo ekhethiweyo ekhethwa ngabantu abaninzi. Ngokungafani neempawu zeengcuka zeklasi, i-watercolor tattoos inokuvelisa impembelelo enjengobomi ekwenzeni ukuthabatha ababukeli.
Iiflanzi zamanzi zentlanzi- I-tattoo yeentlanzi yinto enye ethandwayo yombonakaliso we tattoo njengoko inomgangatho ojikelezayo. Ukubonakalisa i-tattoo yeentlanzi emanzini kusetyenziswa ngokugqithiseleyo ukusetyenziswa kwembala eqaqambileyo kunye nokuphala.
I-Hummingbird i-watercolor tattoos- Iimpawu ze-Hummingbird zizinto ezintle zokudala njengoko ziphosa amaphiko ayo ngejubane eliphezulu, zinika impembelelo ephazamisayo ekuhambeni kwayo kwaye kulula ukwenza i-tattoo watercolor tattoo.
Izindlela zokukhusela ukukhawuleza ngokukhawuleza kwamathambo e-watercolor
Ama-tattoos e-Watercolor athambekele ngakumbi ekuqhathaniseni nokuqhathaniswa nemifanekiso yamasiko. Ukusetyenziswa kombala okhanyayo kumathambo kunokongeza kwintlungu yokukhawuleza ngokukhawuleza. I-watercolor tattoos yobudala ngokukhawuleza xa ukugcinwa kakuhle kuqinisekiswa. Oku kubandakanya:
Khetha umculi ochanekileyo - Umculi onamava amaninzi kulo mzobo wokubhala utyikitya uya kuqinisekisa ukuba itekisi yenziwe ngamacandelo avimbela ukukhula kwayo ngokukhawuleza. Soloko ukhetha umculi wakho ngobulumko ngokubacela ukuba banike iisampula zomsebenzi wabo wangaphambili. Umntu ongeyena ombonayo obonwayo akakwazi ukwenza i-watercolor tattoos njengoko kufuna ukuba uthinteke kunye nokubonakala kwezobugcisa.
Gcineni kude nelanga - Ukukhanya kwelanga kunempembelelo embi ngokulinganayo kumdala kunye namathambo amasha. Ukutshatyalaliswa rhoqo kwe tattoo kwilanga kuya kubangela ukukhawuleza ngokukhawuleza. Ukusetyenziswa kwamandla ephakamileyo e-sun locks to block the effect of sun in your tattoo. Ukumboza amathambo ngokugqoka ngokufanelekileyo kuya kunceda ekukhuseleni ukukhula.
Gcina ulusu luphilile - Ubuhle be tattoo bunokuhlala ixesha elide xa isikhumba esakhiweyo siphelile. Ukutya okunomsoco, ukuhlala ngokwaneleyo nokulala ubuninzi kunendima enkulu ekuqinisekiseni ukutshatyalaliswa kwe tattoo
Ukuhlutha - I-hydrating moisturizer iyimfuneko yokuthintela ukugubha, ukuguqulwa nokufa ngaphandle kwesikhumba kwaye ugcine kakuhle. Ukusetyenziswa kwesiphunga esingenasiphelo sekhwalithi efanelekileyo yesikhumba kuya kunceda ukuphulukiswa ngokukhawuleza kwe tattoo nokukhusela ukubola.
Ukuthintela iRubbing - AmaTattoos kwiindawo ezinokubanjelwa ngokukhawuleza kuya kubangela ukutshatyalaliswa ngokukhawuleza kwee tattoos. Kunconywa ukuthintela ukubeka imizobo phezu kweenyawo zakho okanye iintambo.
Iimpawu ze-Watercolor zenziwe ngaphandle kweyakhe impawu ezichanekileyo xa kuthelekiswa nezobugcisa zendabuko ezifuna umgca ocacileyo kunye nemithunzi. Ama-tattoos e-Watercolor anika abaculi inkululeko yokuvelisa iinjongo ezizodwa kunye namabala emibala. I-watercolor tattoos yazo zonke izakhiwo zingakhiwa ngokubonelelwa, umbhali wezandla unobungcali bobuchule kwi-watercolor tattooing.
tags:tattoos kumantombazana tattoos kubantu tattoo
Iintyatyambo zeTattooizigulaneiipattoostattoo engapheliyoukutshiza amathamboi-tattoostattoos zohlangatattoosngombonoiimpawu zezodiac zempawusibinii-cherry ityatyambotatna tattoozengalo zengaloiifotto zentamoizithunywa zezuluutywala tattooI-Ankle Tattoostattoosiifatyambo zeentyatyambozomculo tattoosicompass tattootattoos zelangaowona mhlobo womhlobotattoos kubantuIndlovu yeendlovuTattoos zeJometritattoozinyonitattoos ezinyawotattoo yamehlotatto flower floweriidoticute tattoostattoosi tattooiifoto eziphakamileyotatto tattoostattoongesandlaIintliziyo zeTattoosbathanda i tattoosdesign mehnditattoos zenyangaihoi fish tattootattoizifuba zesifubatattoos kumantombazanatattoo yedayimanitattoos